आज भाईटिका, लौ तिहार पनि सकियो | Pardesh ko Chautari Baata (परदेशकाे चाैतारी बाट)
आज भाईटिका, लौ तिहार पनि सकियो
October 30, 2008 at 12:33 am 1 comment
आज यमपञ्चक को पाचौ तथा तिहार को अन्तीम दिन अर्थात आज भाइटिका ।
दिदी बहिनी हरुले आफ्नो दाज्यु भाइलाई निधार मा सप्तरङी टिका अनि कहिले पनि नओइलाउने मखमली फूलको माला गलामा लगाइदिई यमराज सँग लामो आयु को कामना गर्दै लगाइदिने चलन छ । भन्निन्छ आजको दिनमा यमराजले कसैलाई पनि यमलोक लादैन रे !
यमुना ले आफ्नो दाज्यु यमराज लाई आजैको दिन कसैको पनि ज्यान नलिने बाचा गराइ टिका लगाइ दिएको पौराणिक किम्बदन्ती मा लेखिएको पाइन्छ । त्यसैले पनि भाईटिका को ठुलो महत्व रही आएको हो ।
खै यसपाली पनि आफ्नो निधार त रित्तै हुने भयो, मेरो निधार खाली भएपनी तपाईहरु चाही खाली नराख्नु नि! दिदी बहिनी लाई टन्न कोशेली दिन नभुल्नु नि फेरि………..
लौ त हेर्दा हेर्दै तिहार पनि कत्ती छिटो हाम्रो घर आगनमा आएर पनि बिदा लिने सुर्-सारमा छ । देउसी भैलो कत्तिको खेल्नु भो कुन्नी ? जे होस रमाइलो गरेर मनाउनु भयो भन्ने सोचेको छु, लौ त अहिले लाई बाई बाई ………. 🙂
आज गोवर्धनपूजा तथा नेपाल सम्बत ११२९	Face as music visualizer
1. indra | October 20, 2011 at 4:01 pm
सिन्धुपाल्चोक- जुवा खलरहेको अवस्थामा प्रहरीले सिन्धुपाल्चोकको चौताराबाट बिहीबार ६ सरकारी कर्मचारी सहित २६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जुवा खेलिरहेको सूचना प्राप्त भएपछि गएको…